တရုတ်အလှပြင်ဆိုင် 1000W ဂျာမနီနိုင်ငံဘားဒိုင်ဒီလေဆာရောင်ခြည်အမြဲတမ်းနာကျင်မှုမရှိသော whitening755 1064 808 nm စက်ယိုဒီယိုလေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | KEYLASER
အလှပြင်ဆိုင် 1000W ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ Bar diode လေဆာရောင်ခြည်အဆိပ်အတောက်ကင်းမဲ့သောအဖြူရောင်ရောင် 7575 1064 808 nm စက်သုံးဒိုင်ဒါလေဆာရောင်ခြည်ကိုဖယ်ရှားခြင်း
Diode လေဆာစွမ်းအင်သည်အရေပြားအပေါ်ဆုံးအလွှာကိုထိုးဖောက်ပြီး၎င်း၏စွမ်းအင်ကိုဆံပင်သို့လွှဲပြောင်းပေးသည်။ ဆံပင်တွင်ရှိသော melanin မှစွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူပြီးအပူသို့ကူးပြောင်းပေးသည်။ ဆံပင်များပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိတစ်သျှူးကိုပျက်စီးစေခြင်းမရှိဘဲဆံပင်များပျက်စီးစေပြီးနောက်ဆုံးတွင်ပျက်စီးစေသည်။
Diode လေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားရေး -K800
၁။ မော်ဒယ် K800
2. အမှတ်တံဆိပ်အမည်: KEYLASER
မြင့်မားသောပါဝါ w 3. 1000
၇.၂ filter များ၊ quadruple protection
၁၂ * ၁၂ (၁၂ * ၁၆)
TEC လေအေးပေးစက် + ရေ + လေ
114 * 41 * 125 စင်တီမီတာ
125 * 57 * 50 စင်တီမီတာ
ပို့ခြင်း 3-5 အလုပ်လုပ်ရက်အတွင်း
ရှေ့သို့ ICELEGEND 1200W diode လေဆာရေစိုခံလေဆာရောင်ခြည်
နောက်တစ်ခု: အိတ်ဆောင် 1000W 808nm diode လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားစက်